Airbus A320 Family Mega Pack FSX & P3D mhando 3.05
Downloads 561 946
Munyori: Project Airbus nevashandi vayo, François Doré, vakapindurwa naLuis Quintero, misangano yeRoooooo http://fsxluchoals.blogspot.com/
Updated musi 10 / 03 / 2018: Yakagadziridza chiratidzo chisina kunaka chezviputi muhotera yepamusoro pamwe nekuchinja kwejiji (yakagadzirwa naTomi Koivunen "project_airbus_modification.zip"). Wakawedzera Jakobho Larsen V-Speed ​​gauge (kuongororwa kuongororwa kweV1, V2, neV3) nekutaura mumuromo. Wakawedzera "Flight Data" panhizha (yakaitwa naHans Zuidervaart) iyo inoita kuti zvikwanise kuzarura masuo nemakamuri emakamuri nemaoko nyore, uye zvinoita kuti zvikwanise kuwedzera kuenzanisa nekukurumidza uye inopa ruzivo rwakanyanya pamusoro pokutiza uye nyika ndege. Wakawedzera pane jira rinobvumira kushandiswa kwePushback zvakananga uye nezwi (rakagadzirwa naRob Barendregt "rcbgh-50.zip")
Updated musi 05 / 09 / 2017: Auto-installer version 10, ikozvino inofambidzana nePrepar3D v4 (yakaedzwa), nekuvandudzwa kwe dsd_fsx_xml_sound uye dsd_p3d_xml_sound_x64 muchigumisi 5.2.5 (Kushanda kushanyira muP3D v4)
Heino mega pack ye Airbus A320 Family ne 145 kugadziriswa kwehupamhi hwepamusoro. Ikoti iyi ine Airbus yese yemhuri A320 (ina mienzaniso) nemitambo yemitambo yakadai seCFM56 uye International Aero Engines V2500.
Inosanganisira mufananidzo wega wega jongwe rekotori (VC) ne shanduro chaiyo V3 (3.05) naFrançois Doré, iyo inowedzera zvakanakisisa kubudirira (zvakakosha kuverenga bhuku iri muchiChirungu kana muchiFrench).
Inosanganisira PURI yeBlue YEKU inovhenekera jongwe rako rakakwana ne LEDs bluu.
Zvinosanganisira GPWS, AUTOFLARE, etc uye kakawanda tsika maonero vane jetway uye zvinhu Codes nechimwe repaint. Mifananidzo yeVC yakashandurwa muHD.
INOKOSHA:Iyo ndege inobuda mukati Cold & Dark mamiriro (injini uye zvishandiso zvinobviswa). Verenga zvakakwana User Chinyorwa pamusoro François Doré, izvo zvaisanganisira kuziva startup nzira pamwe Bleeds, munyori achiri anobvumira Ctrl + E basa kuti vapiwa kutanga injini pamwe Fly By Wire nzira mu "Hwakanaka MUTEMO".
ZVAKAITIKA BUGS: Kana Icho Chepamusoro chepanho risingaratidzi, zvino unoda FSX-SP2. Zvose zvikamu zvinoda zvishoma FSX-SP2 kana FSX-Acceleration kana FSX Steam Edition kana Prepar3D ...
Kana kuenderera kwako kusati kwava kutonhora nekusvibiswa kwerima kana iwe injini dzinovhara pakarepo mushure mokunge tabuda, Izvi nekuti kwenyu default ndege ndiyo yepakutanga default kutiza FSX, pamwe Ulm, ichibhururuka pa "Chishanu chengarava".
Kuti ugadzirise dambudziko racho, iwe unofanira kungoita kutiza, neine ndege yako yaunosarudza, uye iyo ndege yako yaunosarudza, apo iyo yakareba inotakurwa inobvisa zvose zvese zveyi ndege (injini, bhatiri, kupisa) uye kuchengetedza ndege nokuongorora checkbox mu "Save ndege" yewindo inonzi "ita izvi zvisizvo".
Zvadaro rega FSX.
Vhura faira FSX.CFG (ine Notepad) iri mu:
Kana iwe uri Vista kana Seven kana Windows 10 "C: - Users - Username - App Data - kungomberereka - Microsoft - FSX"
kana iwe uri Windows XP "C: - Documents uye Settings - Username - Application Data - Microsoft - FSX"
Muchikamu [CHINHU], wedzera mutsetse: DzvoraPreload = 1
Vhurazve FSX, dambudziko rakagadziriswa.
Runyoro rwekugadziriswa nemuenzaniso:
Mexicana of Aviación
Air China - Retro Livery
Cockpit akatungamirira RUVARA
Airbus A320 Family Mega Pack FSX & P3D mhando 3.05 Download
Downloads: 28 140